သားဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့အခန်းလေးကိုရှင်းရာမှ မိခင်ဖြစ်သူပေးထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကို ခုချိန်ထိသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်(ရုပ်သံ) – Cele Snap
သားဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့အခန်းလေးကိုရှင်းရာမှ မိခင်ဖြစ်သူပေးထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကို ခုချိန်ထိသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်(ရုပ်သံ)
ပရိတျသတျကွီးရေ…နိုငျငံကြျောအဆိုတျော ရမှေနျ(ခ)တှတျပီ (Idiots Band ) ဇှနျ ၂၃ ရကျမနကျပိုငျး က အစာအိမျသှေးကွောပေါကျရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ရမှေနျဟာ Idiots ဂီတအဖှဲ့နဲ့အတူ “လူအဂီတ” ပှဲဦးထှကျ စီးရီးထှကျရှိခဲ့ပွီး တေးသီခငျြးတှကေိုလညျး ကိုယျတိုငျရေးသားသီဆို ခဲ့တဲ့ လူငယျအဆိုတျောတဈ ဦးဖွဈပါတယျ။
ရမှေနျ ကှယျလှနျခဲ့တဲ့အတှကျ နိုငျငံတဝနျး ရမှေနျရဲ့ ပရိသတျအမွောကျအမြားက လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ရမှေနျအတှကျ ဝမျးနညျးကွောငျးဆုတောငျး ပေးခဲ့ကွတာပါ။ရမှေနျရဲ့မိခငျဒျေါခငျမွတျမှနျဟာဆိုရငျ သားဖွဈသူဆုံးပါသှားတာကို ခုထကျတိတိုငျလကျမခံနိုငျပါသေးဘူးနျော.။ဒီတဈခါမှာဆိုရငျလညျး သားဖွဈသူရမှေနျရဲ့အခနျ့လေးကိုသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးနတေဲ့အခြိနျ တှခေဲ့ရတဲ့အရာလေးတှကေိုပွောပွရငျး သူမစိတျဆိုးလို့ရေးပွီးပေးထားတဲ့စာလေးကိုပါ အမှတျတရသိမျးထားတဲ့အကွောငျးကိုမိခငျဖွဈသူဒျေါခငျမွတျမှနျက ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
အဲ့ဒါကတော့ “သူဆုံးတော့ မှ သူ့အခနျး ကိုရှငျးရငျးတှတေ့ာတှကေ သူက အမှတျတရတှေ ကို သိမျးထားတယျဆိုတာပဲ အနျတီ သူ့ ကို ဆူပွီးရေးထားတဲ့ စာက အစ သိမျးထား တယျ. “ဆိုပွီးရမှေနျရဲ့အကွောငျးလေးတှကေိုပွောပွထားတဲ့ အငျတာဗြူးဗီဒီယိုအပွညျ့အစုံကိုပရိတျသတျကွီးအား အခုလိုပဲတဈဆငျ့ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော.။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိ ပါတယျ။
Source and video Credit ; Hall of Fame by Eleven
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရေမွန်(ခ)တွတ်ပီ (Idiots Band ) ဇွန် ၂၃ ရက်မနက်ပိုင်း က အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေမွန်ဟာ Idiots ဂီတအဖွဲ့နဲ့အတူ “လူအဂီတ” ပွဲဦးထွက် စီးရီးထွက်ရှိခဲ့ပြီး တေးသီချင်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆို ခဲ့တဲ့ လူငယ်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ရေမွန် ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတဝန်း ရေမွန်ရဲ့ ပရိသတ်အမြောက်အများက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေမွန်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြတာပါ။ရေမွန်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ဟာဆိုရင် သားဖြစ်သူဆုံးပါသွားတာကို ခုထက်တိတိုင်လက်မခံနိုင်ပါသေးဘူးနော်.။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း သားဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့အခန့်လေးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန် တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြရင်း သူမစိတ်ဆိုးလို့ရေးပြီးပေးထားတဲ့စာလေးကိုပါ အမှတ်တရသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းကိုမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်မြတ်မွန်က ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့ “သူဆုံးတော့ မှ သူ့အခန်း ကိုရှင်းရင်းတွေ့တာတွေက သူက အမှတ်တရတွေ ကို သိမ်းထားတယ်ဆိုတာပဲ အန်တီ သူ့ ကို ဆူပြီးရေးထားတဲ့ စာက အစ သိမ်းထား တယ်. “ဆိုပြီးရေမွန်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြထားတဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုအပြည့်အစုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးအား အခုလိုပဲတစ်ဆင့်ကူးယူတင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်.။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
သမီးလေးကိုချီပြီး ချစ်ဇနီးချမ်းချမ်းသွားတဲ့နေရာမှန်သမျှ နောက်ကနေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလိုက်ရိုက်ပေးနေတဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ခင်ပွန်း
ခရီးသွားပုံရိပ်တွေတင်ကာ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ်စ်ပေါ်မှာပြန်လည်တွေ့မြင်လာရတဲ့ ယဉ်လတ်